indlu yeprana - Iphuli yabucala - I-Airbnb
indlu yeprana - Iphuli yabucala
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguJessica
I-Coziness phakathi kweentaba zedolophana yaseToca da Onça, ephakathi kwendawo yokukhusela indalo ye-11 km ukusuka eLumiar, i-5 km yendlela emdaka.
Indlu ye-Rustic enemigangatho eyenziwe ngamaplanga enika intuthuzelo ngakumbi;
Amanzi anezimbiwa anikezelwe kumthombo wesiza.
Ukuya kwi-4 abantu
Ifanelekile kwabo bafuna iingxangxasi, ukukhwela intaba, ukunyuka intaba, imidlalo egqithisileyo kunye nokuzola kwisandi seentaka!
Qonda ixesha elongeziweyo kunye nePrana.
Iyahambelana kakhulu, indawo yethu yenza iindwendwe zonwabele indalo, isandi seentaka, ukuphuma kwelanga nokutshona kwelanga kunye nenyanga zibonisa ukuba uza kubona ngendlela ekhethekileyo eCasa Prana! Owu, iinkwenkwezi, Milky ! ICasa Prana ikufutshane neendlela neendawo ezintle kule ngingqi ezinamathuba ahlukahlukeneyo okunyuka intaba kwihlathi lethu leAtlantiki. Iphuli yethu ekhethekileyo yeendwendwe zethu iyamangalisa! Ukudayiva nokuziva ngathi ukufutshane ezintabeni yinto ekhethekileyo!
I-Casa Prana inezinto onokuzonwabela zobuqu!
Ikhupha edongeni ukuze ikonekte (kwakhona).
I-Wifi – i-26 Mbps
I-Toca da Onça eLumiar ayinazo iimarike, zibekwe kumbindi weLumiar, ukuze kube lula kuwe, thatha yonke into oyifunayo ngokuhlala kwakho. Kufuphi neCasa Prana kukho iPoço Toca da Onça, ethengisa iitrout namashwamshwam, njengekeyiki yayo edumileyo yecassava kunye neebhiya, ukongezelela ekubeni mnandi kakhulu ekuhlambeni.
Ubomi bobusuku kubumelwane obungqonge iToca da Onça, apho iCasa Prana, iLumiar kunye neSão Pedro da Serra zikhoyo, zihlala ziyi-bohemian, ngeempelaveki ezimibalabala zemiboniso eyahlukeneyo ngamagcisa asekuhlaleni.
Isiginali yeselfowuni ayilungile okanye ayikho, kodwa iCasa Prana ineWifi.
Siya kufumaneka kuyo nayiphi na imeko kaxakeka kunye nokuhanjiswa kwezitshixo.
Sihlala sijonge ukuhlala kwakho okulungileyo.